September 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
September 29, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta oo Axad ah kulan la yeeshay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Galan iyo saraakiil katirsan ciidamada, sida taliska ciidamada Puntland ay ku sheegeen […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 20 dagaalyahan iyo hoggaamiye sare oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda. Weerarka oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya […]
September 28, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa yaraysay xanibaada duulimaadyada ay saartay magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo. Balse duulimaadyada u socda iyo kuwa ka imaanaya Kismaayo ayaa […]
September 27, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa balanqaaday in ay fulin doonto go’aan walba oo ay Maxkamada Caalamiga ah ka gaarto muranka xadka badda ee kala dhaxeeya Kenya, ayna aqbali doonto xuduuda ay samayso maxkamadu. “Sida sharciga caalamiga […]
Somalia committed to comply with any United Nations International Court of Justice ruling on its maritime border dispute with Kenya, and to accept the boundary that is delimited by the tribunal. “As a matter of […]
September 26, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu ka qeybgali doono caleemosaarka madaxweynaha Jubbaland. Wareysi ay la yeelatay laanta Af-Soomaaliga ee VOA, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu kamid yahay martida lagu casumay caleemosaarka. […]
September 25, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wefdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Arbaco ah u safray dalka Turkiga. Weftiga ayaa waxaa kamid ah wasiiro, xildhibaano iyo ganacsato kuwaasoo halkaas uga qeybgali doona […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa balaarin doonta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, sida uu sheegay wasiirka duulista iyo garoomada Puntland Xuseen Cusmaan Lugtoor. Shir jaraaid oo uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta oo Talaado […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa agaasime cusub u magacaabay haayada nabadsugida iyo sirdoonka Puntland. Mukhtaar Maxamed Xasan ayaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee haayada nabadsugida iyo sirdoonka Puntland, sida lagu sheegay digreeto […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Hoose ee degmada Garoowe oo kaashanaysa shirkada korontada ee gaarka loo leeyahay ee NECSOM ayaa bilowday mashruuc layrar loogu xirayo waddooyinka magaalada. Masuuliyiinta maamulka dowladda hoose ayaa sheegay in mashruucaan layrar ku [...]